01/13/14 ~ MOBILE IT NEW
7:38 PM Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ No comments
အပိုင်း (၂) Notebook , Laptop , Netbook and Desktop ရဲ့ ကွာခြားချက်များ။
Screen size နှင့် အလေးချိန်..
Screen size က Laptop screen size ထက်ပိုပီး သေးငယ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဈေးကွက်မှာ9လက်မ ကနေပီးတော့ 14 လက်မ ထိ တွေ့နိင်ပါတယ်။ Laptop Screen size ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ 14 လက်မ ကနေ 17 လက်မ ထိ တွေ့နိင်ပါတယ်။.Screen အရွယ်အစား ငယ်တာ ကြီးတာ အပြင်.နောက်ထပ် ကွာခြားသွားတာကတော့ ခရီးတခုကို သွားတော့မယ်ဆိုရင် အလေးချိန်က Netbook က 0.9 kg ကနေပီးတော့ 1.4 kg ထိပဲ့ရှိပါတယ်။Laptop မှာတော့ 1.4 kg ကနေပီးတော့ 5.4 kg ထိ ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ အလေးချိန်နဲ့ Screen size အရွယ်အစားကို နှစ်ခု ယှဉ်ပြောပြတာပါ။
Processor နှင့် ဈေးနုန်း
Netbook မှာ အသုံးပြုတဲ့ Processor တွေကို low-end processor တွေကိုပဲ အသုံးပြုထားပီးတော့ Laptop မှာတော့ Higher-level- processor တွေထိ တွေ့နိင်ပါတယ်။ low-end processor ဆိုတာ အရင်က ထုတ်လုပ်ပီး ခုချိန် ခေတ်နောက်ကျနေပီဆိုတဲ့ Processor မျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ နားလည်လွယ်အောင်ရေးလိုက်တာပါ။ low-end processor ဆိုတာ ဥပမာ ဒီလို Processor မျိုးတွေပါ။
Intel core2solo ဒီလို ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ လာပါတယ်။
Netbook မှာ ဒီလို low-end processor တွေကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ဂိမ်းဆော့ဖို့ နဲ့ Entertainment တွေ အတွက်ကတော့ Laptop ကို မမှီနိင်စေတဲ့ အချက်တခု ဖြစ်စေပါတယ်။ Processor နိမ့်တာ နဲ့ အတူ ဈေးနုန်းကလည်း ကွာခြားသွားပါတယ်။ Netbook ကို ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဒေါ်လာ 150 ကနေ 400 ၀န်ကျင်လောက် အထိ တွေ့နိင်ပီးတော့ Laptop မှာတော့ ဒေါ်လာ 2000 ကျော်ထိ တွေ့နိင်ပါတယ်။ ဈေးနုန်က Laptop တွေက ပိုမြင့်သလို Netbook မှာ မလုပ်ဆောင်နိင်တဲ့ ဂိမ်းဆော့မလား… Movies ကြည့်မလား Netbook ထက် သာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို Laptop မှာ ရရှိနိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Hardisk နှင့် Performance
HDD ကိုပြောရမှာတော့ ခုနောက်ပိုင်း မှန်းဆထားတဲ့ခေတ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ Storage များတာ နည်းတာက အဓိကမကျသလို ဖြစ်အောင် Cloud Storage တွေ ပေါ်လာတာကိုတော့ သတိထားမိကြမယ်ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်း Cloud storage တွေ ခေတ်တခေတ်ပေါ်လာရင်တော့ ဒီ Storage ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို သိပ်သတိထားမိကြတော့မယ် မထင်ဘူး။ ခုတော့ သတိထားမိအောင် ပြောကြည့်ကြရအောင်။ Laptop မှာ HDD ကို RPM 5400 HDD တွေနဲ့ အတူတွေ့နိင်ပါတယ်။5400 RPM နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Laptop တွေက ဘာကို အားနည်းသွားသလဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ program တခုခုကို ဖွင့်တာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အခြား Drive တခုခုကို Access လုပ်တာပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် နဲနဲ နှေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်တော့ မသိသာပါဘူး။ ပီးတော့ Laptop မှာ HDD ကို Storage 160 Gb ကနေ 600 Gb ထိ ရှိပါတယ်။ Netbook မှာတော့ အဲ့လို မဟုတ်တော့ဘူး Netbook မှာ SSD (Solid state drive) တွေနဲ့ တွေနိင်တာကိုတော့ တချက် သတိထားကြည့်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ SSD က HDD ထက်ပိုပီး Performance ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လို ကောင်းလည်းဆိုတာကို ဒီအောက်က Video ဖိုင်လေးမှာ တချက်သတိထားကြည့်ပေးပါ။ဒါပေ့မယ် Netbook ရဲ့ Storage Drive ရဲ့ ၀င်ဆန့်မူကတော့ 8 Gb ကနေပီးတော့ 160 Gb ထိပဲ ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်တော့ Upgradation လုပ်လို့တော့ ရပါတယ်။
Operating System နှင့် RAM
OS ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ ကွာသွားတာလေး တချက်ရှိတယ်။ ဒါကတော့ Laptop တွေမှာ စပီး ၀ယ်ယူကတည်းက ခုနောက်ပိုင်းမှာ အနည်းဆုံး Window7home Premium နဲ့ လာပါတယ်။ ပြောပြချင်တာကတော့7ကို ကောင်းကောင်းသုံးလို့ ရတယ်ပေါ့။ အဲ့ Netbook မှာတော့ XP နဲ့ Linux ကိုပဲ့ ကောင်းကောင်း အသုံးပြုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း Netbook တွေမှာတော့ Vista ကိုပါ အသုံးပြုလို့ တော့ ရလာပါတယ်။ ဒီလို Operating system မြင့်သုံးလို့ရတာနဲ့ မရတာကဘာကြောင့် Laptop and Netbook မှာလာပီး ကွာခြားသွားတာလည်းဆိုရင် RAM ကြောင့် လည်းပါတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုရင် Netbook တွေက RAM တွေကို 1 Gb တွေပဲ့ ပါဝင်တာများပီး Laptop ကတော့ RAM ကို2Gb ကနေ စပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း OS ပါကွားခြားသွားနိင်တာလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
Multimedia Display and Disc Drive
Laptop့့ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ့ Video ကြည့်မယ် ဂိမ်းဆော့တာ တွေနဲ့ လူတယောက်တွက် Entertainment တွေကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိင်သလို Editing ပိုင်းတွေကိုပါလုပ်ဆောင်နိင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Graphics ကို အနည်းဆုံး 256 Mb ကနေ စပီးပါဝင်လာလို့ပါပဲ။ Netbook မှာတော့ Only basic Graphics capabilities ပဲပါဝင်မှာပါ။ နောက်တခုကတော့ Netbook မှာ CD/DVD Drive မပါပါဘူး။
Battery နှင့် ခရီးသွား..
Battery က ကျွန်တော်တို့ နိင်ငံတွက်တော့ ပိုပီးအရေးပါတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Netbook battery တွေက ပိုပီး သုံးဆောင်လို့ ရနိင်မယ့် ကြာချိန်ပိုများပါတယ်။ Netbook battery တွေက ၈ နာရီနှင့် အထက်ထိတွေ့နိင်ပီး… Laptop တွေမှာတော့ ၃ နာရီကနေ ၆ နာရီကျော်ထိပဲ့တွေနိင်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းသုံးဆောင်မယ် ဆိုရင် Netbook က Laptop ထက်ပေါ့ပါးပီး…အချိန်ကြာရှည်ပိုပီး အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Laptop နဲ့ Netbook ရဲ့ ကွာခြားချက်လေးတခုရှိပါသေးတယ် ။ ဒါကတော့ Netbook က Network ကို အသားပေးပီး ထုတ်လုပ်ထားတာပါပဲ့။ ကျွန်တော် Netbook နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို အတော်အသင့်ပြောပီးပါပီ.။ဒီပိုစ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်လေးကို ဆက်စပ်မိအောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ် ။
အပိုင်း ၁ Links
7:19 PM Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ No comments
Laptop အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ တင်ထားတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် စရေးပြီး အပိုင်းတွေကို ၂ ထိပဲ့ ရေးထားပါသေးတယ်။ ဒါပေ့မယ်ဆိုဒ်တိုင်းမှာ လိုလိုရောက်နေပြီး ဖတ်ပြီးသူတွေလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အပိုင်းသုံးထိ ဒီဆိုဒ်မှာ ဆက်ရေးပေးသွားပါ့မယ်။ကျွန်တော် Laptop တလုံးကို စတင်ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေ သိထားသင့်တယ် ဘယ်အမျိုးအစားတွေက ဘာအတွက် ပါဝင်လာတယ် နောက်ထပ် ဘယ်အပိုင်းလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပီး ၀ယ်ယူရမယ်ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ Laptop တွေ ခေတ်စားလာတာနဲ့ အတူ ထွက်လာတဲ့ အမှားများစွာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ပီးရင်ဆိုင်နေရသူတွေ ရှိသလို ကျွန်တော်တို့ ဘယ် အမျိုးအစားက ဘာအတွက် သုံးတယ်ဆိုတာကို သိဖို့တွက်ကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် နားလည်သလောက်ကို လူတိုင်းနားလည်အောင် တက်နိင်သလောက် အသေးစိတ် ဆန်ဆန် ရေးပေးချင်မိပါတယ်။ တပိုစ့်ချင်းဆီကို စောင့်ဖတ်ပေးပါလို့ ပဲ့ တောင်းဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်တွေကို အောက်က လို အပိုင်း ၃ ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်။
7:16 PM Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ No comments
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ Power Plan settings ကို Advanced ပြင်ဆင်ရမယ့် နည်းလမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ Laptop ရဲ့ Battery life ကို အရှည်ကြာဆုံး ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် ဒီအချက်တွေ ပြင်ဆင်ရပါမယ် >>
Hard Disk ရဲ့ Power plan ကို အမြန်ဆုံး turn off လုပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်။
Wireless adapter, processor အထူးသဖြင့် graphics card အတွက် low-power mode ကို အသုံးပြုပေးပါ။
ပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ System cooling policy setting ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptop system အတွက် cooling mode ကို change ပေးတဲ့ နေရာပါ။ သူ့မှာ Active နဲ့ Passive ဆိုတဲ့ Options နှစ်ခု ရှိပြီး - Active cooling policy ဆိုတာ Processor - slow down ဖြစ်မသွားခင်ကတည်းက cooling ပိုင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေအောင် fan speed ကို မြှင့်တင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး - Passive cooling policy ဆိုတာကတော့ Processor - slow down ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှ fan speed ကို မြှင့်တင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Options နှစ်ခုထဲမှာ Passive cooling policy ဟာ Power consumption ပို ထိန်းထားနိုင်ပြီး battery life ကိုလည်း ပိုပြီး ကြာရှည်စေပါတယ်။
Photo by JustinLowery
ဒီအကြောင်းအရာကို ကိုကေဇတ် ရေးပေးခဲ့တာပါ။ အားတဲ့ အချိန်လေး ဆိုဒ်ကို စာလာဖတ်သူတွေလည်း ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖတ်လို့ရအောင် ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာပါ။အားလုံးအကျိုးရှိဖို့တွက်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပိုစ့်တွေ မရေးနိုင်တော့တဲ့ အတွက် စာဖတ်သူအားလုံးကို နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
7:14 PM Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ No comments
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပေးမယ့် အကြောင်းအရာလေးကတော့ အများကြီး လေရှည်မနေတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်ထ လာတဲ့ Laptop ပိုင်းတွေကို ပျက်ရင် ပြင်ဆင်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေမှာ သိထားသင့်တာလေးတွေ ပြုပြင်တက်ဖို့တွေအတွက် Video ဖိုင်တွေ နဲ့ ရှင်းပြထားတာလေးတွေကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေပါသလဲံ့ ဘယ် အပိုင်းတွေကို ပြင်ဆင်ပေးထားသလဲ့ဆိုတာကတော့ အောက်က ခေါင်းစဉ်တွေကို ကြည့်ပါ။ Laptop ရှိသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အပိုင်းတွေ ချည်းပါပဲ့။
ဖြည်ဆွက်ချက် ... အပိုင်း ၁ ကို မေးလာတဲ့ အတွက် ဖြည့်ဆွက်ချက် အနေနဲ့ ထည့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ က introdution အပိုင်းပါ။ အင်ထရို အပိုင်း နဲ့ စက္ကန့်လေး ၄၉ စက္ကန့်မို့ မထည့်ပေးလိုက်တော့တာပါ။ နားလည်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
30 - ToshibaPowerJack-NoSoldering-MD.avi
29 - TestinganInverterandScreen-CompaqLaptop-MD.avi
28 - PowerAdapterFix-GatewayLaptop-HD.avi
27 - CheckingDCJackonHPDV5-hd.avi
26 - SpilledBeeronaDellInspiron1525-hd.avi
25 - HPDV8000-SpilledIcedTea-KeysNotWorking-HD.avi
24 - WaterDamagedLaptop-Toshiba-HD.avi
23 - VaioLaptopPowerJackRepair-HD.avi
21 - PowerJackFix-Aspire3680-HD.avi
22 - TouchpadButtonsNotWorking-HD.avi
20 - ScreenReplacement-PanasonicToughBookCF-W5-HD.avi
18 - ReplacingAKeyboard-DellInspiron1521-HD.avi
19 - ScreenBackCoverReplacement-DellInspiron1521-HD.avi
17 - ReplaceLCDCover-AcerAspire3610-HD.avi
15 - ReplaceCrackedScreen-Aspire3680-HD.avi
16 - WontBootUp-HPDV6000-HD.avi
14 - RemovingAndTestingAHardDriveWithKNOPPIX-HD.avi
13 - PowerJackRepair-GatewayLaptop-HD.avi
12 - PowerJack-DellB130-HD.avi
11 - VaioRibbonRepair-HD.avi
09 - MotherboardReplacement-HPDV6000-HD.avi
10 - ReplaceKeyboard-GatewayLaptop-HD.avi
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.avi
07 - PowerProblems-GatewayLaptop-HD.avi
06 - HowToTakeaLaptopApart-HD.avi
05 - Motherboards-HD.avi
04 - CD-DVDDrives-HD.avi
03 - Batteries-HD.avi
02 - Tools-HD.avi
အပေါ်က ဖိုင် အားလုံးကို ဒီလင့်မှာ သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ အပိုင်းတွေ ပြန်ပိုင်းပြီး တင်ပေးထားပါတယ်။ အကုန်လုံးကို ဒေါင်းပြီး ဖိုရာ တခုထဲ့ကို ဖြည့် Zip ဖြည်ပါ။နံပါတ်စဉ်လိုက် rar ဖိုင်တွေကို သေချာဒေါင်းပါ။ လိုတာ ရှိလာရင် ဒေါင်းရခက်ရင် ပြောပါ အမြဲတမ်း လင့်တွေ မသေအောင်လို့ Skydrive မှာ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒေါင်းချင်တဲ့ ဖိုင် အရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်လေး ပေးပြီး ညာဘက် အခြမ်းက Download ဆိုတာကို နိုပ်ဒေါင်းယုံပါပဲ့။
Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်များ
7:12 PM Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် သိရမည့်အချက်များ No comments
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းလေးကို ရေးချင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ .. ဒါပေမယ့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အရှိန်ယူလိုက် ပျက်သွားလိုက်နဲ့ မရေးဖြစ် ဖြစ်နေတာပါ .. တကယ်တော့ ဒါက ရေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပါပဲ .. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တော်တော်များများ ကွန်ပျူတာနဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ရှိလာသလို ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာလည်း အိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ တစ်နေရာထဲမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်မဲ့ Destop Computer အစား ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်သလို သွားလေရာ ယူဆောင် သွားနိုင်တဲ့ Latop Computer တွေကိုသာ ပိုပြီးတော့ အသုံးများလာတာ တွေ့ရပါတယ် .. အဲ့ဒီအတွက် အများစုအသုံးများတဲ့ Laptop Computer တွေဝယ်တော့ မယ်ဆိုရင် မ၀ယ်ခင် သိထားသင့်တဲ့ လေ့လာထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို နားလည်အောင် အကြမ်းမျဉ်း ရေးပေးသွားပါမယ် ..
ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ် မရေးပဲနဲ့ ဘာလို့ အကြမ်းမျဉ်း ရေးပေးရလည်း ဆိုတာကို ရှင်းပြချင်ပါတယ် .. ကွန်ပျူတာနဲ့ အရမ်းကြီး အကျွမ်းတ၀င် မဖြစ်သေးတဲ့ သူတစ်ယောက် အနေနှင့် ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို အသေးစိတ်ကျကျ ရှင်းပြနေတဲ့ အခါမှာ သူအနေနှင့် ဖတ်ရတာ တွေများလာရင် ဆိုလိုရင်းကို နားမလည်တော့ပဲ လည်ထွတ်သွားတက် ပါတယ် .. ဒါကြောင့် အများစု နားလည်နိုင်မဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် ရေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..ကျွန်တော် ခေါင်းစဉ် နှစ်ခု ထားပြီး ရေးပေးသွားပါမယ် ..
( ၁ ) မ၀ယ်မှီဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
( ၂ ) Latop ၀ယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ် ..
နံပါတ် ( ၁ ) အချက်လေးက အားလုံးအတွက် လိုအပ်ပါတယ် .. ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတန်းစား ပေါင်းစုံရှိပါတယ် .. ချမ်းသာတဲ့သူ ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား ၊ ဆင်းရဲတဲ့သူ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် လက်တော့ မ၀ယ်မှီမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် .. ဈေးကြီးပေးရမှ ဒီပစ္စည်းက ကောင်းမယ် ဆိုတာလည်း မမှန်ပါဘူး .. ဒီပစ္စည်းကတော့ ဘာကြောင့် ဈေးကြီးနေတာ ( ဥပမာ ။ ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ပိုပြီးတော့ ဆန်းသစ်နေလို့ အဲ့ဒီအတွက် တန်ဖိုး ပိုကြီးနေတာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကပဲ ကောင်းနေလို့ ဈေးကြီးနေတာလား ) ဒါမှမဟုတ် ဘာကြောင့် ဈေးသက်သာနေတာလည်း ( ဥပမာ ။ ။ အထဲမှာဆင်ထားတဲ့ Hardware ဆိုင်ရာ ဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကတော့ ကောင်းနေပြီး ပုံစံက ပုံတုန်းကြီး ဖြစ်နေလို့လား ၊ အထဲမှာ ဆင်ထားတဲ့ Hardware ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက အနိမ့်စားတွေ ဆင်ထားလို့လား ဆိုတာကို ) ကွဲကွဲပြားပြား သိဖို့လိုပါတယ် .. ဒါမှသာ မိမိတို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Laptop မျိုးကို သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းမျိုး ပေးပြီး ၀ယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အရင်ဆုံး မိမိက Laptop ကိုဘာအတွက် ၀ယ်မှာလည်း ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပါ .. ပိုက်ဆံ ချမ်းသာလို့ ငွေဘယ်လောက် ကုန်ကုန် ဆိုရင်တော့ အခုနောက်ဆုံးပေါ် Core i7 Latop မျိုးကို ဒီဇိုင်းပုံစံ လန်းလန်းလေးနဲ့ Brand ကောင်းကောင်း လေးနဲ့ ဈေးကြီး ပေးဝယ်လိုက်တာ ပြသနာ မရှိပေမယ့် ကိုယ်ကလည်း လက်ထဲမှာ ငွေကို ချင့်ချိန်နေရတဲ့သူ တကယ်လည်း လိုအပ်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ သူမျိုးအတွက် ကျတော့ အရွေးမမှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် .. ဒါမှသာ မိမိတက်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏနဲ့ ကိုယ့်အတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ Latop မျိုးကို ရွေးချယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Latop တစ်လုံး ၀ယ်တော့မယ် ဆိုရင် မိမိတို့က ဘာအတွက် သုံးမှာလည်း ဆိုတာကို စဉ်းစားပါ .. ဖျော်ဖြေမှုသက်သက် အတွက်ပဲ သုံးမှာလား ၊ ရုံးလုပ်ငန်း အတွက် သုံးမှာလား ၊ ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လေ့လာဖို့အတွက် သုံးမှာလား ၊ မိမိက လက်တော့ ၀ယ်ပြီးရင် ဂိမ်းအကြီးစားတွေ ဆော့ဖို့ အထိ စဉ်းစားထားလား ဆိုတာတွေကို ထည့်ပြီး တွေးဖို့ လိုပါတယ် .. ဒါမှသာ မိမိလုပ်ချင်တာနဲ့ သင့်တင့် မျှတတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဖျော်ဖြေမှု အတွက်ပဲ သုံးချင်တယ် .. မိမိက သက်သက်မှတ်မှတ်ကြီး သုံးစရာတော့ မရှိဘူး အဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အင်တာနက်သုံးပြီးတွေ့မယ် မိသားစုတွေထဲက အဝေးရောက်နေသူ တွေရှိရင်လည်း အင်တာနက်မှာ တွေ့မယ် ပျင်းတဲ့ အခါတွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ် သီချင်းနားထောင်မယ် ဆိုတဲ့သူမျိုးကတော့ Hardware ပိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အရမ်းကြီး မမြင့်ရင်တောင် ဒီဇိုင်းလှလှ လေးနဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တာမျိုးလေးတွေ ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ရုံးသုံး စာစီစာရိုက်သုံးမယ် လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုရမ်းထားပြီး အမြဲသုံးနေလို့ ရပါတယ် ဆိုတဲ့ သူမျိုးကျတော့ လည်းအပေါ်နဲ့ အရမ်းကြီးမကွာပါဘူး .. ကိုသုံးမဲ့ ရုံးသုံးလုပ်ငန်းတွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ယုံနဲ့ ရုံးတွေဘာတွေကို ယူသွားမယ် ဆိုရင် လည်းအမြင်တင့် စေမဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ Hardware ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေက အရမ်းကြီး မမြင့်ရင်တောင် အလယ်အလတ်တန်းစားလောက် ဆိုရင်ကို သူ့အတွက် အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ် ..
နောက်တစ်ချက် ကွန်ပျူတာပိုင်း ဆိုင်ရာတွေမှာ သုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူမျိုးကျတော့ ပုံစံဒီဇိုင်း အရမ်း မကောင်း ရင်တောင် Hardware ပိုင်းဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကိုတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်တာမျိုးတွေ ကို သုံးသင့်ပါတယ် .. မိမိတို့က ဆော့ဝဲတွေ ရမ်းမယ် စမ်းသပ်ချင်တာ တွေကို စမ်းသပ်မယ် ဖြုတ်မယ် တပ်မယ် ဒေါင်းလော့တွေ ခဏခဏ ချမယ် Upload တွေတင်မယ် ပြီးရင် စက်ကို အမြဲတမ်း ၂၄ နာရီပါတ်လုံး အသုံးပြုဖြစ်နေတဲ့ အခါတွေ ရှိမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ကောင်က Hardware ပိုင်း ဆက်စပ် ပစ္စည်း မြင့်တာနဲ့ အကြမ်းခံမဲ့ ကောင်မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်ယူတာ ကပိုပြီး အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Latop မ၀ယ်ပဲ Destop သာဝယ်ပေါ့ဗျာ .. ကျွန်တော်က Laptop Crazy ဖြစ်တဲ့ သူအတွက် ရွေးချယ်လို့ရအောင် ပြောပြတာပါ .. ဒီလိုလူမျိုး အတွက်တော့ ဒီဇိုင်းပိုင်းထက် Hardware ပိုင်းစပ်ဆက် ပစ္စည်းတွေ ကောင်းမွန်တာမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ် ..
နောက်ဆုံးတစ်ချက် ဂိမ်းသမားတွေကတော့ မိမိတို့ဝယ်မဲ့ လက်တော့မျိုးကို Hardware ပိုင်း သင့်တင့်ပြီး Ram , Graphic ပမာဏ များတာ မျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ၀ယ်ယူထားသင့်ပါတယ် .. အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင် Gamer တွေအတွက် သီးသန့် ထုတ်ပေးထားတဲ့ Laptop Brand မျိုးတွေကို တောင်တွေ့နေရပါပြီ ..
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် နှိုင်းယှဉ်ပြ ထားတာ ကတော့ မိမိတို့အသုံးပြုမဲ့ ပုံစံနဲ့ အတက်နိုင်ဆုံး သင့်လျော်မဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ် နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် .. တကယ်လို့ မိမိက ပိုက်ဆံလည်း တက်နိုင်တယ် ကောင်းကောင်းလည်း လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းပုံစံ လန်းလန်းနဲ့ Hardware ပိုင်းမြင့်တာတွေကိုသာ ၀ယ်သုံးပါ အဆင်ပြေပါတယ် .. ကျွန်တော်က ချင့်ချိန်ဝယ်ယူရမဲ့ သူမျိုးတွေအတွက် နှိုင်းယှဉ်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ် ..
( ၂ ) Latop ၀ယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း
ကဲ မိမိကလည်း အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေနဲ့ ဆန်းစစ်ပြီးသွားပြီ လက်တော့ ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် Hardware ပိုင်းဆက်စပ် ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုကြည့်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်မလည်း Brand ချင်းအတူတူ Processor Series ချင်းတူရင်တောင် ဈေးနှုံးချင်း ဘာလို့ ကွာခြား နေတာလည်း ဆိုတဲ့ ခြားနားချက်လေးတွေကို ကြည့်တက်အောင် ရေးပေးသွားပါမယ် ..
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် Graphic ပါတာကို ရွေးဝယ်မလား Ram အနည်းအများကို ကြည့်ပြီး ၀ယ်မလား ဆိုတာကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ် .. ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ Laptop မှာ Ram နည်းရင် ထပ်တိုးလို့ ရပေမယ့် Graphic မပါရင်တော့ ထပ်ြ့ပီး အသစ်စိုက်လို့ မရပါဘူး .. ။ ဒါကြောင့် မိမိတို့က မ၀ယ်ခင်ထဲက မိမိတို့ဝယ်မဲ့ Laptop မှာ Graphic ပါသလား မပါဘူးလား ဆိုတာကို လေ့လာသင့်ပါတယ် .. ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီ အချက်တွေကို ဘယ်လို ကြည့်ကြမလည်း .. အောက်မှာ ဆက်သွားရအောင် ..
ကျွန်တော်တို့ Laptop တွေ ၀ယ်တဲ့ အခါမှာ ဈေးနှုံးကိုလည်း အရမ်းကြည့်လို့မရပါဘူး .. ကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက် ပေါ်လိုက်ပြီး ဆန်စစ်ပြီးမှ ၀ယ်သင့်ပါတယ် .. တစ်ချို့ Latop တွေက Design ပိုင်းကို ဦးစားပေး ထားတဲ့ အတွက် ပါဝင်တဲ့ Hardware အမျိုးစားချင်း တူရင်တောင် ဈေး ပိုကြီး နေတက်ပါတယ် .. တစ်ခါ တစ်လေ သတိထားပြီး ကြည့်ပါ .. Brand ချင်းလည်း တူတယ် ကျန်တဲ့ အမျိုးအစားချင်းလည်း တူတယ် .. ဒါပေမယ့် အဖြူရောင်နဲ့ အနက်ရောင် ပုံစံလေး နည်းနည်း ကွာသွားတာနဲ့ ဈေးလည်း ကွာဟ သွားတာမျိုး တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ..
အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ Laptop ၀ယ်ဖို့အတွက် သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အမျိုးအစားတွေကို သိဖို့ လိုပါလ်ိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီအတွက် ပြည်ပမှာ နေတဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်က ဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်မဲ့ သူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်က ပြထားတဲ့ Laptop နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက် တွေကို ဘယ်လို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်နိုင်မလည်း ဆိုတာကို အောက်မှာ ကျွန်တော် အမျိုးအစား တစ်ခုချင်း အလိုက် ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး Processor ကိုကြည့်ပါ ... မိမိဝယ်မဲ့ လက်တော့က Intel လား AMD လား အရင်ဆုံး ခွဲခြားပါ .. ကိုက Intel ထဲကပဲ ၀ယ်ချင်တယ် ဆိုရင် မိမိဝယ်မဲ့ လက်တော့က Core i3 လား Core i5လား Core2Dual လား Core2Quad လား စသည်ဖြင့် ကြည့်ပါ .. ပြီးရင် မိမိတက်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုံးနဲ့ Processor အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ .. ပိုက်ဆံတက်နိုင် ရင်တော့ နောက်ဆုံး ထွက်တဲ့ Processor အမျိုးအစားကို ရွေးချယ် ၀ယ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ် ..
နောက်တစ်ချက် Laptop Detail ထဲမှာ Operating System ဆိုပြီး ပါပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒါက ဘာကို ပြတာ
လည်းဆိုတော့ မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ အသုံးပြုမဲ့ Windows အမျိုးအစားကို ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ Laptop ၀ယ်တဲ့ အခါမှာ ပေးရမဲ့ တန်ဖိုးထဲမှာ အဲ့ဒီ Windows အတွက်ပါ
ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် .. ကျွန်တော်တို့ Windows ကို ၀ယ်ပြီး သုံးရတာပါ .. Microsoft ® Windows 7
Home Basic စသည် ဖြင့် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် ..
Memory ပမာဏ ကိုတော့ Detail ထဲမှာ Mb နဲ့ ဖော် ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် . အဲ့ဒီအတွက် Laptop မှာ Rum
ဘယ်နှစ် Gb ပါတယ် ဆိုတာကို သိဖို့ အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Unit ရေတွက် ပုံလေးကို
1 Tetrabyte = 1099 Gegabyte
ဒါမှသာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 4096 Mb ဆိုရင်4Gb ၊ 3072 Mb ဆိုရင်3Gb စသည်ဖြင့်
အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါဆိုရင် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ Ram ဘယ်လောက် ပါတယ်
ဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သိထားရမှာက Laptop မှာ Ram ကို
ထပ်ပြီး တိုးလို့ ရပါတယ် .. ဥပမာ ။ ။ ကျွန်တော်တို့က Ram2Gb ပဲ ပါတဲ့ Laptop ၀ယ်ထားတာ
ဆိုရင် နောက်ထပ် 1Gb ,2Gb ထပ်တိုးတာတို့ လုပ်နိုင်ပါတယ် ..
ဒီမှာက ဘာကို ကြည့်ရမလည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop ရဲ့ Screen အရွယ် အစားကို
ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. Screen အရွယ်အစား အကြီး အသေးကို လိုက်ပြီး မိမိရဲ့ Laptop
အရွယ်အစားကလည်း အကြီး အသေး ကွာသွားပါလိမ့်မယ် .. 14" , 15.6" , 17.3" စသည်ဖြင့် အသီးသီး
ရှိပါလိမ့်မယ် .. မိမိတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ် ..
Hard Disk မှာ မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာပါ ၀င်တဲ့ Hard Disk ရဲ့
ပမာဏကို ဖော်ပြပေး ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် .. 320 GB , 500 GB , 640 GB စသည်ဖြင့် အသီးသီး Hard
Disk ရဲ့ Data တွေကို Store လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီကောင်လေးကတော့ ဘာမှ အရေးမပါသလိုနဲ့ တော်တော် အရေးပါပါတယ် .. မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့ Laptop မှာ
Optical Drive ပါမပါတော့ သေချာ ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ် .. ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့
Optrical Drive မပါတဲ့ Laptop ကို ၀ယ်မိပြီ ဆိုရင် နောက်ပိုင်း Windows အသစ်ပြန်
တင်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Software တွေ Install လုပ်ဖို့ အခွေထည့်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမှာ
မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် Optical Drive ပါတာကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် .. Optical
Drive ပါတဲ့ Laptop တွေမှာ DVD-Super Multi Double Layer စသည်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီးတော့ Optical
Drive မပါဘူး ဆိုရင်တော့ no ဆိုပြီး ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ် ..
အများစု မသိကြတဲ့ အထဲမှာ ဒီကောင်လေး ပါပါတယ် .. ဆိုင်က ပြတဲ့ Detail ကို ကြည့်ပြီး အများစုက
မိမိဝယ်မဲ့ Laptop မှာ Video Card ပါမပါတောင် မသိကြပါဘူး .. Laptop မှာ Video Card မပါဘူး ဆိုရင်
ကိုယ့်ဘာသာ အသစ် စိုက်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝယ်မဲ့ Laptop မှာ Video Card
ပါမပါလည်း သေချာလေး ကြည့်သင့်ပါတယ် .. Video Card က Brand နှစ်မျိုးရှိပါတယ် .. Nividia နဲ့ ATI
ပါ .. မိမိတို့ ကြိုက်တဲ့ Brand ကို ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ် .. တကယ်လို့ Video Card ပါတဲ့ Laptop တွေရဲ့
Detail ထဲမှာ Nividia Geforce ® GT 520MX 1024Mb ၊ ATI ™ Mobility Radeon ™ HD6630
1024Mb စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ် .. ဒီနေရာမှာ တစ်ခု သိထား ရမှာက ပါဝင်တဲ့ Graphic
ပမာဏ ကို Gb နဲ့ မဖော်ပြပဲ MB နဲ့ ပဲ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. 1 Gb ဆိုရင် 1024 MB ၊ 512 MB
စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေး မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. တကယ်လို့ Video Card မပါတဲ့ Laptop တွေမှာ ဆိုရင် Intel ®
HD Graphics 3000 Intel ® GMA HD စသည်ဖြင့် ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒါဆိုရင် မိမိတို့ ၀ယ်မဲ့
လက်တော့မှာ Video Card ပါမပါ ရွေးချယ် နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်တော့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အဓိကထားပြီး သိထားသင့်တဲ့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့
အချက်လက် လေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် .. ကျန်တဲ့ Wifi , Bluetooth ပါမပါ သူ့မှာပါတဲ့
Battery Card က ဘယ်လောက် အသုံးခံလည်း (2hour ,3hour ) Laptop ရဲ့ အလေးချိန်
စတာတွေကိုတော့ ကျွန်တော် တစ်ချက် ချင်း ရေးမပေးတော့ပါဘူး .. အပေါ်မှာ ရေးပေးခဲ့တဲ့
အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး Laptop တစ်လုံး ၀ယ်ဖို့ အတွက် အနည်းနဲ့ အများ အထောက်
အကူ ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF ဖြင့် လိုချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ ..
Download From Ifile.it ၊ Download From Ziddu ၊ Download From Sharebeast
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြပါစေ ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ .
Nay Min Maung.
Laptop ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းမျဉ်း သိထားသင့်သော အချက်...
iOS 7.x Jailbreak toolv 1.0.4